CFM: “Mba ho mendrika ireo kandidà” | NewsMada
CFM: “Mba ho mendrika ireo kandidà”
“Manao antso avo izahay amin’ireo mpiantsehatra rehetra, indrindra ireo mirotsa-kofidina ho filoham-pirenena hampiseho fa mendrika ny andraikitra faratampony sy masina katsahinareo, ka mba hitandro, aoka izany, toy ny anakandriamaso ny soatoavina malagasy sy ny fitoniana amin’ny teny ary ny fihetsika ianareo.”
Izay ny fanambaran’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM), omaly, manoloana ny teny feno fihantsiana sy fankahalana ary fanozonana nataon’ny kandidà ho filohan’ny Repoblika iray teny Mahamasina, ny 30 oktobra lasa teo. Aoka samy hahatsapa fa mandalo ny fifidianana, ary mpifaninana fa tsy mpifahavalo ireo kandidà. Nefa ny aina sy ny hoavin’ny Malagasy no tandindonin-doza.
Efa misy fandraisana andraikitra
“Zava-doza indrindra eo amin’ny Malagasy ny fanozonana, satria mihatra hatrany amin’ny taranaka fara mandimby”, hoy ny CFM. Efa mandray andraikitra tandrify azy avy, araka ny voalazan’ny lalàna manankery, amin’ny fihetsika toy ireny ireo fahefana mahefa ary ireo mahatsapa fa iharam-boina, na ara-batana na ara-tsaina.
Mampiseho fanosihosena tanteraka ny soatoavina malagasy, mifototra amin’ny fanajana ny aina, ny teny feno fihantsiana sy fankalahalana ary fanozonana. Ny fanahy no olona, ny fihavanana ary ny fahamendrehana. Zava-doza indrindra eo amin’ny Malagasy ny fanozonana, satria mihatra hatrany amin’ny taranaka fara mandimby.